China Yakagadzirwa nemaoko Ceramic Wall Tiles 6 × 6 fekitori uye vagadziri | YANJIN
Saizi: 6x6inch (15.2x15.2cm)
Kurema: 0.31kg / pc
MOQ: 480pcs / dhizaini
Pasuru: 10pcs / furo bhokisi, 120pcs / katoni
Kurema Kweimwe Carton: 39.6kg
Saizi katoni: 64x38x39cm
Yedu madziro mataera achishandisa zvedongo nzira uye dhizaini basa rakaunzwa kumberi kubva kuChina humambo hwetsika zenith, glazed hari mataira akaumbwa mumhando dzakagadziriswa mabasa ehunyanzvi.
Iwo mataira emadziro ave kushandiswa zvakanyanya munzvimbo zhinji, senge nzvimbo yemoto, imba yekugezera, kicheni, dziva rekushambira uye imba yekutandarira. Iwo akanakisa ekushongedza kweimba yako nehofisi.
Nekuda kwemaoko avo akapenda zvakasikwa, hazvishamise kuwana dzimwe nguva kutadza, kupopota, kana mumvuri misiyano mukati meiyo tile. Iyi misiyano inoonekwa sechinhu chinodikanwa muchigadzirwa.
Kuwedzera runako uye runako kukicheni, mabhati, mashawa, machira epamusoro nematera edu akagadzirwa nemaoko, shongedza hupenyu hwako.
Avo vanotsvaga rakasarudzika tarisiro yeImba yavo kana Bhizinesi, uye avo vane kuonga kwekusika uye neakanaka ruzivo rwunongogona kupihwa nehunyanzvi Tsika Tile Artist, vanozowana kugutsikana kusingaenzanisike uye mafaro anogona kungopihwa chete nemaoko akapendwa mataira.
(1) Yakasiyana dhizaini yakaitwa nemaoko tile, senyika, maodzanyemba akadziva kumadokero, echinyakare, erudo, eVictorian, oceanic, mhuka, shiri, maruva, miriwo, nezvimwe. Tinogona zvakare kugadzira nekugadzira zvinoenderana nekudhirowa kwako uye chikumbiro.
(2) Maoko ese akapendwa nevashandi vedu vehunyanzvi.
(3) Akasiyana mavara uye dhizaini, akanaka uye anti-kusvibiswa maficha.
(4) Usage: Sutu chero chemukati shongedzo yemarudzi ese enzvimbo. Simbisa hunhu.
(5) ukobvu: 7-8mm
(6) yakapusa kugeza uye kuchengeta
(7) Yakapiswa pakanyanya kupisa
(8) Zvakatipoteredza-zvine hushamwari zvekudhira zvinhu
1) Bhizinesi Mitemo: EXW, FOB kana CIF
2) Kubhadhara Mitemo: 30-100% dhipoziti, TT, West Union, isingachinjiki L / C.
3) Yekufambisa modhi: nechikepe, nendege kana nekodhi
4) Isu tinopa rairo yehunyanzvi pane yega yega maitiro ezvigadzirwa.
5) Dhirivhari zuva: 20-35days mushure mekusimbisa iyo odha.
Isu tinogona may ekugadzira ako mareferenzi.
Mamwe emapatani ematera anoratidzwa pamufananidzo anogona kutsiva, nekuda kwekutenderera kwedu kwesitoko.
Kana iwe uchitsvaga chaiyo pateni kana solid color tile, ndapota taura nesu.
Pashure: Yakakurumbira Dhizaini Yeakakwira Ruregerero Ceramic Matiles - Fridge Magnet - Yanjin
Zvadaro: Ceramic Yakashongedza Matiles Border
Kuvaka Manhamba Akaitwa nemaoko Ruoko Akavezwa Ceramic Tile Wall Kushongedza
Yakagadzirwa nemaoko Ceramic Wall Tile